Fiarovana ny Herbivores | Reef Resilience
Ny tetik'asa fitantanana tetikasa iray dia ny fananganana faritra mihidy ho an'ny fanjonoana, toy ny fanakatonana ny fihodinana any Hawai'i. Sary © Stacey Kilarski
Herbivores, anisan'izany ny karazan-trondro sy ny karazam-biby tsy azo lavina, dia manan-danja amin'ny fanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina. Amin'ny alàlan'ny fihinana alaola, ny herbivore dia afaka misoroka ny macroalgae amin'ny vatohara be loatra na ny toeram-ponenana manan-danja ho an'ny fanangonana coral. Ny herbivore manan-danja dia ahitana ny parrotfishes, ny fikarakarana aretina, ny bakteria, ary ny gera (na dia urchins dia mety hiteraka bioerosiona tsy azo ovaina rehefa misy isa be loatra).
Ny fanimbana ny mponina ara-ponenana, indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny elanelana avo lenta amin'ny alàlan'ny fanafody na ny ala, dia afaka mampiova ny fandanjana avy amin'ny haran-dranomasina ho an'ny fanoherana ala. ref Io fiovan'ny fiaraha-monina sy ny firafitry ny vondrom-piarahamonina (ohatra, avy amin'ny vatohara iray tarnin'ny fanjakana algal) dia antsoina hoe fiovan'ny dingana. Raha vao nisy ny fiovan'ny toetr'andro, dia mety ho sarotra ny hamerenana ny rafitra ho amin'ny fifehezana ny haran-koditra satria ny fikambanana macroalgal matotra dia matetika karazan'ny karazan-tsakafo amin'ny fikojakoana na simika izay mahatonga azy ireo ho marefo kokoa na azo tsaboina amin'ny herbivores. Ny fisorohana ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny fiarovana ny herbivore amin'ny fitrandrahana an-tsokosoko (miaraka amin'ny fampihenana ny fampidirana ireo sakafo mahavelona) dia heverina ho hevi-dehibe ho an'ny fitantanana ny haran-dranomasina.
Ireo mpitantsoratry ny haran-dranomasina dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fifehezana ny famindrana ny herbivore any amin'ny faritra voaaro (MPA) izay misy azy ireo, ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjono sy ny mpitantana ny mpanjono mba hiarovana ny fahafahan'ny mponina any amin'ny faritry ny harenan'ny haran-dranomasina. Ny lalàna lalàna momba ny fisimbana dia afaka manome fepetra ara-dalàna manan-danja amin'ny fiarovana ny herbivore, saingy, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny paikady fitantanana ny fanjonoana efa tsy natao mba hiarovana ny andraikitra amin'ny asa toy ny herbivory.
Misy karazana fitaovana sy paikady mahazatra mahazatra azo atao mba hiarovana ny herbivore. Anisan'izany ireto:
Ny famerana ny fitantanana ny trondro vokatry ny trondro voajanahary, toy ny papyrus, dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny alga sy ny haran-dranomasina. Sary © Henry Wolcott 2005 / Marine Photobank
Fikatonan'ny faritra - Ny fandraràna ny fanesorana ny herbivores (na ny fandraràna ankapobeny momba ny fanjonoana) amin'ny ampahany amin'ny toeram-ponenana na amin'ny toerana manan-danja ho an'ny herbivores (toy ny toerana fanangonana) dia afaka manampy amin'ny fihazonana ny herbivore populations.
Fiarovana amin'ny familiana - Ny herbivore amin'ny ankapobeny dia tsy tratra amin'ny jono sy ny jono fisaka, ary ny tanjona dia ny hampiasa fandrika, harato na lefona. Ny sasany amin'ireo trondro voajanahary, toy ny parrotfishes, dia tena mora miadana amin'ny fisotroan-dronono sy ny fanjonoana amin'ny SCUBA. Mety hampihena ny tsindry amin'ny herbivore ny fampiasana ny karazana jono sasany na ny fotoana fanjonoana.
Mandrarana ny karazana - Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fiarovana ny herbivore dia ny fametrahana fandraràna tanteraka ny fanangonana karazan-tsakafo faran'izay manan-danja. Natao an-toerana izany ankehitriny, anisan'izany i Belize. Ny fomban-tany mifototra amin'ny tsena, toy ny fandraràna ny fivarotana ny herbivore, dia mety hanakana ny fanjonoana ara-barotra ho an'ny karazan-tsakafo, na dia misy hatrany aza ny fisian'ny fisotroan-dronono any amin'ny toerana maro.
Fikirakirana ara-potoana - Ny anjara asan'ny herbivore dia mety manan-danja indrindra aorian'ny fisafotofotoana izay mamono ny haran-dranomasina, toy ny rivo-doza na ny vatohara manga. Ny mpikarakara dia afaka mandinika fetra tsy maharitra amin'ny fambolena karazam-boankazo manan-danja mba hampitombo ny fahafaha mety hitrandrahana ny vatohara raha tsy misy ny fanerena loatra ny fifaninanana tafahoatra amin'ny algà.
Famerenana amin'ny laoniny - Raha toa ka nihena ny habibiana tamin'ny fihoaram-piterahana na aretina, ny famerenana mavitrika dia mety ho ny fomba azo tanterahana indrindra hananganana ny mponina ho amin'ny ambaratonga ilaina amin'ny fisorohana na famerenana ny fiovan'ny toetrandro. Ny voka-pifidianana efa nopotehina dia ny fifantohana amin'ny fitsaboana vonjimaika any amin'ny toerana sasany izay izy ireo no iray amin'ireo loharanon'ny herbivory (izay mety ho marimaritra iraisana amin'ny habetsahan'ny herbivore voa lany), saingy mbola tsy nisy ny ohatra famerenana amin'ny laoniny .
Fanamafisana ny foko Urchin
Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpitantana dia mandray andraikitra hampitombo ny isan'ny mponina amin'ny fikajiana ny fanohanana ny akoran'ny vatohara, indrindra ireo faritra izay nipoitra ny habetsaky ny herbivore hafa (ohatra ny parrotfishes sy ny bitro). Ohatra, any Karaiba, ireo mpikaroka dia maminavina ny mety hisian'ny arina ranomasina ao anaty labs ary mamindra azy any an'ala. Ao Hawaii, ireo mpitantana dia nanangona sy namoaka ireo karavasy mpanangona (Tripneustes gratilla) hanalefaka ny ala mitentina ary hampiroborobo ny toeram-piarovana.
Hetsika hafa no nodinihina mba hampitombo ny mponina ao amin'ny ranomasina, toy ny fanorenana vatoharan-javamaniry izay manome alika honina amin'ny biby miafina miafina avy amin'ny biby mpihaza, ary ny fameperana amin'ny fanjonoana ny vorona mpihaza (ohatra: triggerfish sy lozisialy lehibe kokoa) izay afaka manohana ny fanarenana ny urein mponina. Na dia niezaka aza ny tetikasa fanatsarana ny lozam-piaramanidina, dia mbola voavaha ny fitohizan'ireo ezaka ireo. ref
Fikarohana sy fampiharana
Herbivore Maneran-tany amin'ny Hawai'i
Raha misy trondro an-dranom-bary isan-karazany dia mandray andraikitra amin'ny famerenana ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny vatohara. Ny fianarana roa vao haingana dia maneho ny fihodinan'ny fiovaovan'ny toetr'andro iray amin'ny karazana "tsy fantatra". ref Ireo fianarana roa ireo dia nampiasa tetikasa goavam-be nasehon'izy ireo tamin'ny Great Barrier Reef sy ny fampiasana kamera anaty rano mba hanoratana ny karazana tompon'andraikitra amin'ny fiovan'ny toetran'ny macroalgal amin'ny algôma sy ny haran-dranomasina.
Fianarana iray ref dia nanambara fa ny karazany tokana, Naso unicornis, dia saika tompon'andraikitra tamin'ny fanesorana Sargassum biomass. Ny fianarana faharoa ref Manaporofo ny fanarenana ny vatohara (fanesorana Sargassum) Voalohany indrindra noho ny vono olona, Platax pinnatus. Ny vokatr'ireo fianarana roa ireo dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ireo vondrona izay miaritra ny fahaverezan'ny tontolo iainana eo an-toerana. Ny tetik'asa fitantanana sy fikajiana ny fiarovana dia mety mila mijery mihoatra ny karazana karazana, ary mifantoka amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana sy fiarovana ireo karazan-tsoratra fototra ao amin'ny vondrona.
Ho fanaraha-maso ny fikajiana ny ala marinaro amin'ny haran-dranomasina any Maui, Hawai'i, ny Kahekili Herbivore Maneran-tany dia niorina. Natao hampiroboroboana ny habetsahan'ireo karazana trondro voajanahary sy arina maromaro amin'ny alalan'ny fomba fitantanana fisakafoana. Ohatra, ireo zana-tovovavy tanora miteraka (Tripneustes gratilla) dia navoaka tao amin'ny vatohara mba hialokaloka ireo ala mpihaza ary hampiroborobo ny fanarenana ny vatohara.
Video: Mampiasa ny Herbivores mba hitehirizana harambato (2: 39)
Darla White, fizaràn'ny Hawaii ao amin'ny sampan-drano momba ny rano, dia mamaritra ny fomba fitantanana ny fanjonoana ny haran-dranomasina.
Ny fanaraha-maso voajanahary amin'ny algoroky ny ranomasina dia natao hanampiana ny tontolo iainana an-dranomasina any amin'ny faritra hiverina ho salama tsara. Ny faritry ny fitantanana dia mandràra ny fanaratoana trondro amin'ny fianakaviana manaraka: Kyposidae (soka-dranomasina), Scaridae (parrotfishes) na Acanthuridae (fialokalofana) na sarimihetsika ranomasina.
Ho any amin'ny toeram-piasana an-dranomasina sy ny fiveloman'olon-tokana azo itokisana: Torolàlana ho an'ny Mpitahiry Coral Corps Karaiba; Toko: Fitantanana ny harena an-kibon'ny tany, Korontana 6: Fitantanana ny fambolena karakarazo miaraka amin'ny faritra voaaro habaka
Fandinihana momba ny raharaha - fitantanana ny jono amin'ny fanjarian-dranomasina: Kahekili Herbivore Fisheries Management area
Fandinihana momba ny raharaha - Fanaraha-maso ny vondron'ny vondron-dranomasina ao amin'ny faritra fiarovana voalohany amin'ny herbivore ao Hawai'i